Iyo nguva iri pakati pemaseams, hupenyu hwakagwinya hwaSira Quiroga | Zvazvino Zvinyorwa
Iyo nguva iri pakati pemaseams (2009) inoverengeka nemunyori wechiSpanish María Dueñas. Iyi inyaya yakanyatsogadzirwa pamusoro pehupenyu hwakasimba hwaSira Quiroga, mudiki anogadzira zvipfeko uyo akabva kuMadrid mwedzi mishoma Hondo Yenyika isati yatanga. Zvichakadaro, kune muverengi, maitiro emunyori kune yakakosha nhoroondo yezvakaitika muSpain neEuropean iri kuratidza.
Nechikonzero ichi, bhuku iri rine kukosha kusingarambiki seuchapupu hwenguva iyoyo (kunze kwekufunga kwaunofambisa). Pamwe chete, rangano rerudo nekurwadziwa, pamwe nerondedzero yeicho chaicho chenguva iyoyo kuburikidza nehurombo hwakapfuma uye hunonakidza kuteedzana, rimwe remabasa akatanhamara akanyorwa mumutauro wechiSpanish wemireniyumu nyowani.
1 Pfupiso yeiyo Nguva Pakati Pezvikamu
1.2 Kudzoka zvakare
2 Kuongorora pane iyo nguva pakati pemaseams
2.1 Iyo yechokwadi chaiyo nhoroondo
2.2 Musoro wakakosha munoverengeka
2.3 Kugadziriswa kweterevhizheni
2.3.1 Kutanga kwefranchise?
3 Nezve munyori, María Dueñas
3.1 Iko kukanganisa kweiyo Nguva Pakati Pezvikamu
3.2 Mamwe mabhuku aMaría Dueñas
Pfupiso ye Iyo nguva iri pakati pemaseams
Sira Quiroga mudiki uye anoyevedza dressmaker uyo akagamuchira yakakosha nhaka kubva kuna baba vake, uyo anorumbidza zvine simba kutiza Spain. Iwo makumi matatu apfuura, manheru ehondo yeVanhu, Sira anogona kunzwa mhirizhonga munharaunda. Pamusoro pezvo, musikana wechidiki anodonha achipenga murudo naRamiro, kunyange achifunga kutamira kuguta guru reMorocco.
Nezvikonzero zvataurwa, musikana anoenda kuna Tangier achitevera nzira yemudiwa wake. Zvisinei, kuverenga kwavo hakuna kuoneka prevarication, hunyengeri uye zvakaipa pane chikamu chaRamiro. Nekudaro, Sira anozviwana asiyiwa muNorth West Africa uye akabirwa nemurume uyu ane mukurumbira (pamwe nechikwereti).
Iyo nguva iri pakati pemaseams ...
Sira anokwanisa kukunda zvisinei nemamiriro ezvinhu akaomarara; Anofunga kutangazve basa rake rekusona mbichana kuti ararame, uye anotodanana zvakare. Nenzira iyoyo, iye anoshamwaridzana nevatengi vanoverengeka… Humwe hushamwari hutsva hune hukama nezvematongerwo enyika pakati pehondo yakaita sehukuru hukuru inosunungura shanduko huru yezviitiko.
Gare gare, Sira Quiroga inosarudza kushanda semusori wemauto akabatana uye inotora chikamu chakakosha mune zviitiko zveHondo Yenyika II. Kunyangwe kumagumo kwenyaya iri pachena kuti protagonist anongoda kugara murunyararo, bongozozo rakanyanya rakamumirira kwaanoenda. Zvisinei, zviitiko izvi zvinotsanangurwa mu sira, chikamu chechipiri che Iyo nguva iri pakati pemaseams (yakaburitswa Kubvumbi 2021).
Kuongorora pa Iyo nguva iri pakati pemaseams
Iyo yechokwadi chaiyo nhoroondo
Mubhuku rino, munyori anotarisa chinzvimbo chekunyora chinzvimbo, chisingaverengeke zvishoma pane izvo zvinofungidzirwa nhoroondo. Nekudaro, kuiswa kwevatambi chaivo uye zviitiko zvakaitika muma30 kuSpain zvakakosha kune rondedzero.
Pamusoro peizvi - kuburikidza nezviitiko zve protagonist-, Dueñas zvine hunyanzvi anotsanangura mamiriro ehondo yechipiri yenyika. Kuti aite izvi, munyori anoshandisa rondedzero uye mareferensi anoratidza chiono chake pamusoro pehondo yakakosha yehondo munhoroondo yevanhu. Iko kune chinangwa chekuchengetedza nhamo yehondo ichinonoka mundangariro dzevaverengi.
Musoro wakakosha munoverengeka
Zviripachena, kana uchitarisana nenhoroondo yenhoroondo, hazvigoneke kuti usape kukosha kwakakosha kune mamiriro ezvinhu zviitiko zvinorondedzerwa. Naizvozvo, Iyo nguva iri pakati pemaseams inochengeta muverengi achitevera hupenyu hwaSira Quiroga, achiratidza kutaridzika kwehondo. Mune mamwe mazwi, dingindira rehondo mumamiriro emunhu rinomhanya nenyaya yese.
Zvakare, protagonist - pasi pekodhi zita Arish Agoriuq - inova chikamu chakakosha cheEngland espionage panguva yeHondo Yenyika II. Mukufanana, maitiro akaomarara ehondo anoburitswa anoenda pamusoro penjodzi isingadzivisike. Uye zvakare, iyo nzira yeiyo Spanish Civil War inotsanangura kuti nharaunda yemagariro yakava sei nekuda kwekukonana.
Kugamuchirwa kukuru kweruzhinji pamwe nekuwanda kweongororo dzakanaka kwakatungamira Iyo nguva iri pakati pemaseams yakaunzwa kukrini diki. Neichi chikonzero, Muna 2013, iyo Antena 3 chiteshi cheterevhizheni chakateedzera nhevedzano yezita rimwe chete iro rave riine zvikamu gumi nezvinomwe kusvika zvino. uye akaunganidza mibairo yakawanda.
Uyewo, Iyo akateedzana ine yepasi rose cast inotungamirwa nevatambi vechimiro cheAdriana Ugarte, Peter Víves naHanna New, pakati pevamwe. Chikamu chega chega chakateedzana chakada avhareji bhajeti yehafu yemiriyoni euros, kunyanya nekuda kwenguva yekugadzika uye zvipfeko.
Chero zvazvingaitika, yanga iri mari yakashandiswa chaizvo, nekuti iwo ekuona mwaka wekutanga haana kumbodonha pazasi pe11%. Inosanganisira, chikamu chegumi nerimwe, "Dzokera kuZuro", chakaonekwa nevanhu vangangoita mamirioni 5,5 (27,8% yakaiswa muna Ndira 20, 2014).
Pakupedzisira, nekutanga kwe sira (2021) María Dueñas akavhura musuwo kune zvimwe zvekuendesa zvine nyeredzi Sira Quiroga - Arish Agoriuq. Tichifunga nezve mukurumbira uye nhamba dzekutengesa dzakawanikwa pachiratidziri chidiki, vateereri vanotaura chiSpanish havangashamiswe kana zvikamu zvitsva zvemakateedzana zvikaonekwa.
Nezve munyori, María Dueñas
Iye mudzidzisi wechiSpanish uye munyori akazvarwa mu1964, muPuertollano, kuCiudad Real dunhu, Spain. Usati watanga basa rako rekunyora, Varidzi Akaita hupenyu hwedzidzo mukudzidzisa kweanopfuura makore makumi maviri kuYunivhesiti yeMurcia. Saizvozvowo, mukadzi wePuerto Rican ane doctorate muChirungu Philology uye anga achizivikanwa zvikuru zvetsika uye zvekutsvagisa munyika yeIberia.
Parizvino, María Dueñas anogara muCagagagena, akaroora purofesa weyunivhesiti uye ane vana vaviri. Mukufanana, inosimbisa chiitiko chehungwaru chakauya nekuburitswa kwenhau yake yekutanga muna2009: Iyo nguva iri pakati pemaseams. Nekuda kweizvi, yakave nemukurumbira muEurope yose uye chikamu chenyika dzese.
Iko kukanganisa kwe Iyo nguva iri pakati pemaseams
Iyi inova Yakava bhuku rinotengeswa zvakanyanya, rakashandurwa mumitauro ingangosvika makumi mana uye rikashandurwa kuita nhepfenyuro yeterevhizheni neAntena 3 chiteshi. Nenzira imwecheteyo, nekuda kwezita iri Dueñas akagamuchira zvishongedzo zvakati wandei. Pakati pavo, iro Guta reCagagena Mubairo weNhoroondo dzeNhoroondo (2010) uye iyo Mubayiro weCulture 2011 (chikamu chemabhuku) cheGuta reMadrid.
Mushure memakore gumi nemaviri ekuburitswa, Iyo nguva iri pakati pemaseams inounganidza anopfuura mamirioni mashanu kutengesa pasi rese. Asi, sekunge izvi zvaive zvisina kukwana, iyo novel yakaburitswa kanokwana makumi manomwe nguva muEurope yose nedzimwe nzvimbo munyika.
Mamwe mabhuku aMaría Dueñas
Kuzivikanwa kwe Iyo nguva iri pakati pemaseams yakashandiswa nemunyori wechiSpanish kusimudzira zvinyorwa zvake zvinotevera zvakanyorwa. Zvimwe, pasina mubvunzo, Mision Kanganwa (2012), Kudzikama (2015) uye Vanasikana vaCaptain (2018)Ivo vane yavo chaiyo runako uye vakagadzirwa zvakanaka. Saizvozvo, Mision Kanganwa y Kudzikama ivo vakagadziriswazve terevhizheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Iyo nguva iri pakati pemaseams